Barattoonni Yunivarsitii Jimmaa waraanaan reebaman - NuuralHudaa
Barattoonni Yunivarsitii Jimmaa waraanaan reebaman
Yunivarsitii Jimmaa kaampaasii Kitu furdisaatti, guyyaa har’aa barattoonni ‘ajjeechaan godinaalee Wallaggaa keessatti raawwatamuu fi labsiin Komaand Poostii garasitti labsame haa kaafamu’ jechuun hiriira mormii geggeessan.
Waraanni Federaalaa mooraa Yunivarsitichaa keessa qubsiifame hiriiricha adda facaasuuf sochii godheenis barattoonni 5 miidhamuu maddeen saaxilan.
Barataan dubbifne tokko akka himetti “hardha waaree booda barattoonni karuma nagayaatin hiriira geggeessaa turan. Waraanni Federaalaa mooraa keessa qubsiifamee fi waraanni Raayyaa Ittisa Biyyaa rasaasaa fi Boombii imimmeessaa dhukaasuun bitinneessan. Reebicha raawwataniinis barattoonni 5 haalaan miidhamanii Haakima geeffamanii jiran” jedhe.
Galgala har’aa ammoo naannawa Yunivarsitii fi magaalaa Jimmaa iddoo garagaraatti waraanni lakkoofsaan hedduu ta’an buufamanii jiraachuu fi Magaalattiin sodaa hamaa keessa jirti jechuun barataan kun nuuf hime.
Barattoonni hedduun ukkaanfamanii guuramaa jiraachuus odeyfannoon ni addeessa.
September 22, 2021 sa;aa 6:18 am Update tahe